May Nyane: လယ်တောကအပြန်
ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ အညာဘက်မှာလည်း အဲဒီ တာဝန်ကျ စပါးအကျေ မသွင်းနိုင်လို့ အသက်အရွယ်ကြီးကောင်းကြီးမှ အချုပ်ကျတဲ့ လယ်သမားကြီးတွေရှိတယ်။ ကျနော်သိတဲ့ဦးကြီးဆိုရင်….(အမေတို့က “ကိုရင်တင်” လို့ခေါ်တယ်။) သူ့မှာ သားယောင်္ကျားလေးကလည်းမရှိတော့ သမီးအပျိုကြီးတွေနဲ့ မိန်းမဘဲ ရှိတာ။ တာဝန်ကျစပါးမကျေလို့ အိုကြီးအိုမကျမှ ကုန်းဇောင်းရဲစခန်းမှာ အချုပ်ခံရရှာတယ်။ ရွာမှာရှိတဲ့ အဆွေအမျိုးတွေကလည်း တောင်မင်းကို မြောက်မင်းမကယ်နိုင်ပေါ့။ သနားလိုက်တာ ဆရာမရယ်။ သူ့ခမြာ ရှက်လည်းရှက်၊ ၀မ်းလည်းနည်းပေါ့။
အညာဘက်မှာ မြေတိုင်းစာရေးတွေနဲ့ စပါးဒိုင်တွေကလည်း မြွေပူရာကင်းမှောင့်ဆိုသလို ဒုက္ခပေးတယ်။ အခုတော့မသိ။ မဆလ လက်ထက်က လယ်တကွက်ရဲ့ စပါးထွက်နှုန်းကို မြေတိုင်းစာရေးက ကွင်းစွပ်ပြီးတိုင်းထွာတယ်။ သူ့နဲ့ အလွမ်းသင့်သူတွေဆိုရင် လယ်ကောင်းလျက်နဲ့ အပျက်ပြတယ်။ သူ့ကို မကပ်တဲ့သူတွေဆိုရင် လယ်ပျက်ပေမယ့် အထွက်တိုးပြတတ်တာမျိုး။
စပါးဒိုင်တွေကလည်း တာဝန်ကျ စပါးသွားသွင်းရင် “ဖုန်၊ သဲ၊ ခဲ” နဲ့ “အစိုဓါတ်” ဆိုတာတွေအတွက် နှုတ်ပြီး စပါးကို ပိုသွင်းခိုင်းသေးတယ်။
ဒါကြောင့် စပါးဒိုင်မှူးတွေ ပိုက်ဆံထောလို့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဝယ်စီးရင် သူတို့ ဆိုင်ကယ်က ဘုတ်၊ဘုတ်၊ဘုတ် မမြည်ဘဲ “ဖုန်၊သဲ၊ခဲ” “ဖုန်၊သဲ၊ခဲ” ဆိုပြီး မြည်သတဲ့။ နောက်စက်ပျက်လို့ ထိုးရပ်သွားရင်တောင်မှ မရပ်ခင် “အစိုဓါတ်”ဆိုပြီး တချက်မြည်ပြီးမှ ထိုးရပ်တယ်လို့ နယ်ကလူတွေ ပြောကြတယ်။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က လယ်သမားဆိုတဲ့လူတွေက သနားစရာ အကောင်းဆုံးပါဘဲဗျာ။ လူတွေလည်း (နအဖ နဲ့ သူတို့ လက်ပါးစေတွေ) ဘယ်လို စိတ်ကြမ်းစိတ်ရမ်းတွေနဲ့များ လူကိုလူချင်း တက်နင်းပြီး ကိုယ့်ချမ်းသာမှုကို ရှာချင်ကြသလဲ မတွေးတတ်တော့ပါဘူးဗျာ။
ဟုတ်တယ်နော် ဆရာ မ လယ်ကွင်းကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေအေးအေးလေးရယ်၊ ကန်သင်းရိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရတဲ့အရသာရယ်၊ ကတွတ်ပေါက်ကရေစီးသံရယ်၊ မျက်စိတဆုံးလယ်ကွင်းပြင်ကြီးရယ် အဲဒါတွေကို အရမ်းသဘောကျတာပဲ။ ရန်ကုန်မှာတုံးက စိတ်တွေသိပ်ညစ်လာရင် မြို့ ပြင်ကိုထွက်ပြီး လယ်ကွင်းတွေဆီကို ထွက်ထွက်သွားတတ်တယ်။
ဒါဖတ်ပီး လယ် စိုက် ဖူး ချင် လာ ပီး)
သူပိုင်ဝမ်းစာစပါးနဲ့မျိုးစပါးတွေစပါးကျီ ( ဒေသအခေါ်
လယ်အပျော်စိုက်တယ်တဲ့လား မ ရယ်။ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါတဲ့ သူတို့ ဘ၀ကို အားကျလိုက်ပါဘိ။ ကျွန်မလဲ မ လို လယ်ရနံ့ လေးကို ချစ်တတ်သူမို့ ။
အမရေးမှဘဲ ဘားအံဘက်က ရှုခင်းတွေကို မျက်လုံးထဲ ပြန်မြင်ယောင်လာပြီ။ ဇွဲကပင် ဘုရားပွဲနဲ့ ဘားအံအကြောင်း တခုခုရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ ရေးမယ်ချည်းဖြစ်ဖြစ်နေတာလဲ ကြာလှပေါ့။
လယ်ကွင်း အနံ့ဆိုလို့ ကျနော် ကြံကြံဖန်ဖန် သတိရတာ ရှိသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ လယ်တဲမှာထိုင်၊ ချောင်းထဲက ဖမ်းလာတဲ့ ဖားလောင်းဟင်း ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာချက်ရယ် တောအရက်ရယ်ကို လယ်ကွင်းထဲက တိုက်တဲ့လေ တဟူးဟူးကိုခံပြီး ညီအကိုတွေ အရသာခံဖူးတာလေ။ :D
A Ma Yae!! Miss alot this Scenery!